Nin Soomaali ah oo looga shakiyay Argagixiso oo Lagu xukumay Dalka Mareykanka – SBC
Nin Soomaali ah oo looga shakiyay Argagixiso oo Lagu xukumay Dalka Mareykanka
Posted by editor on April 29, 2011 Comments
Nin Soomaali ah ayaa lagu xukumay dalka Mareykanka kadib markii lagu soo eedeyay in uu xirir la lahaa kooxo argagixiso ah oo ay kamid tahay Ururka Alshabab sida ay sheegeen Waaxda cadaaladda ee Mareykanka.
Nin ka Soomaaliga ah oo lagu magacabo Axmed Maxamed Dhaqane ayaa lagu xukumay 10 sano oo xarig ah waxaana la sheegay in uu kamid ahaa dadkii aasaasay shirkaddii Xawaaladda ee Barakat iyo ururka Itixaad Alislaami oo labuduba Mareykanku ay ku dareen Liiska argagixisada.
Eedeymaha loo soo jeediyay ninkan Soomaaliga ah ee la xukumay ayaa waxaa kamid ah in uu ka ben sheegay qaabka uu ku galay dalka Mareykanka isagoo sheegay in uu si tahriib ah ku galay isagoo u maray adamo dhowr ah basle laanta sirdoonka Mareykanka ayaa sheegtay in Dhaqane uu degenaa dalka Brazil sanadii 2006-dii ilaa 2008-dii.
Axmed Maxamed Dhaqane ayaa kamid ahaa sida la sheegay dhowr qof oo ay Mareykanku baadi goobayeen waxana laga soo qabtay sanadii 2008-dii xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mixico.
Axmed Maxamed Dhaqane oo 10 sano oo xarig ah lagu xukumay ayaa beeniyay xiliga uu ka hor muuqday maxkamadda dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay wuxuuna tilmaamay in uu yahay shakhsi aanan wax lug ah ku laheyn guud ahaan dambiyada loo soo jeediyay.
Maxamed xaaji xasan Abuukar (Digshinari)